पसल – Himalaya Television
खुकुलो निषेधाज्ञा: केके गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ? कुन बार कुन पसल खुल्छ (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ असार २०७८ काठमाडौं । कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरण हुँदै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो (लुज डाउन) पार्दै मङ्गलबारदेखि निजी सवारी साधानमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिने भएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित...
२१ जेठ २०७८ काठमाडौं । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी भएको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाका समयमा आजदेखि खाद्य पसल खोल्न पाइने छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित बुधबारको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी...
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १० दिन थपियो, किराना पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्ने
१९ जेठ २०७८ काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ महिनाभर लम्ब्याइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले जेठ ३१ गतेसम्मम निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । खाद्यान्न, किराना पसल,...
२१ वैशाख २०७८ काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा कडा बनाइएको छ । उपत्यकामा हालसम्म जारी भएका सबै पास खारेज हुने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको...
१४ फागुन २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले औषधि र आहारपूरक खाद्यपदार्थ एकै ठाउँमा बेचिएका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफलपछि निर्णय गर्ने भएको छ । समितिको बैठकमा ‘खाद्य ऐन, २०२३, औषधि ऐन २०३५ र स्थानीय सरकार...
कुहिएको मासु बेच्दै महोत्तरीका मासु पसल (भिडियोसहित)
५ कात्तिक, २०७७, महोत्तरी । महोत्तरीको जलेश्वरका मासु पसलले कुहिएको मासु बेचेको पाइएको छ । मासु पसल अस्तव्यस्त र घिनलाग्दो अवस्थामा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा जलेश्वरका अधिकांश मासु पसल घिनलाग्दो, मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा भेटिएको र कुहिएको मासुसमेत...
१९ असोज, २०७७ धनगढी । दसैँ तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छ । मङ्सिर ६ गतेसम्मका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ता आकर्षित भएका छन् । सरकारले चाडबाडको अवसरमा आम उपभोक्तालाई...
१५ असोज, २०७७ काठमाडौं । चाडबाडको मौसम सुरु भइसकेको छ । आसन्न दशैं, तिहार, छठलगायतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्गले देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता पसलमा...
१५ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले आजदेखि दशैं,तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका देशभर रहेका कार्यालय, डिपो र डिलर तथा घुम्ती सेवामार्फत सुपथ...
कालोबजारी गर्ने २६ वटा पसलमाथि कारबाही गर्न महानगरपालिकाको सिफारिस
१४ असोज, २०७७ काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कालोबजारी गर्ने २६ वटा पसललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । महानगरपालिकाले २२ दिनमा गरेको बजार अनुगमनमा कालोबजारी गर्ने २६ वटा पसल भेटिएकाले ती पसललाई कारवही गर्न सिफारिस गरेको हो । कोरोना...